WR PUBG Hack 🥇 धोखा दिन्छ, Aimbot, ESP, Walhack - गेमप्रॉन
WR PUBG ह्याक
कुनै पनि वैकल्पिक ह्याक प्रदायकहरूले तपाईलाई इन्टरनेटमा फेला पार्न सक्नुहुन्न। गेमप्रोनसँग सबै भन्दा राम्रो PUBG ह्याक्सहरू छन् र तपाईंलाई मद्दत गर्न जति धेरै जित्न मद्दत गर्दछ।
यो एक विजेता हुन कस्तो छ को एक सानो स्वाद प्राप्त गर्नुहोस् - आज १-दिन उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
पछाडि नराख्नुहोस् र तपाईंको विरोधीहरूलाई दवाव महसुस गर्न नदिनुहोस् - आज १ हप्ता उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
GamePron मा तपाइँको पहुँच गुमाउने बारेमा चिन्ता गर्न चाहनुहुन्न? - आज १ महिनाको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
आज एउटा उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस् र PUBG WR धोकामा तुरुन्त पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै पर्खाई शामिल छैन - तपाईं यसमा ठीक गोता लिन सक्नुहुन्छ!
PUBG WR हैक जानकारी
विन्डोज १० को लागि विकसित, PUBG WR प्लेयर अज्ञातको ब्याटलग्राउन्डमा रुचि राख्ने सबैको लागि इष्टतम ह्याक समाधान हो। त्यहाँ छनौट गर्न को लागी धेरै छन्, तर केहि कम यहाँ गेमप्रोन मा फेला परेका मानक पूरा हुनेछ। यस धोखाको लागि समर्थित CPU हरू Intel र AMD हुन्, र यो HWID लक भएको बेलामा तपाईलाई HWID स्पूफरमा पनि पहुँच दिइन्छ। यो PUBG को कुनै पनि संस्करणमा काम गर्दछ र PUBG खेल्ने हाम्रा सबै प्रयोगकर्ताका लागि उत्तम फिट छ - त्यसैले अर्को पटक तपाईं खेल्नुहुन्छ र बच्चाहरूको जस्तै आफ्नो प्रतिस्पर्धाको उपचार गर्न चाहनुहुन्छ, मात्र हाम्रो PUBG WR ह्याक सक्षम गर्नुहोस्।
हाम्रा अन्य उपकरणहरूमा तपाईंलाई मनपर्ने सुविधाहरू अझै यहाँ अवस्थित छन्। तपाईं एक प्लेयर / आईटम ईएसपी सुविधा, साथै प्लेयर जानकारी भित्र समावेश फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यस उपकरणको साथ आउने PUBG Aimbot शुद्ध छ, र तपाईं हाम्रो Minimap / 2D रडारको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
खेलाडी ईएसपी (हड्डी)
Minimap 2D रडार
PUBG WR को बारेमा
हामीले यो उपकरणलाई विन्डोज १० प्रणालीमा प्रयोग गर्नका लागि विकसित गरेका छौं, र यसले इंटेल र एएमडी सीपीयू समर्थन गर्दछ। यो केवल अंग्रेजीमा आउँदछ, र यसले केही फरक पार्दैन कि यदि तपाईं हार्डवेयर प्रतिबन्धको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने
यस उपकरणले HWID स्पूफर पनि समावेश गर्दछ। यो स्ट्रिम प्रुफ हो, ताकि तपाई लाइभ स्ट्रिमिंगको बखत यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र र दर्शकहरूसँग कुनै संकेत हुनेछैन! तपाईं यस PUBG WR धोखाको साथ पूर्ण स्क्रीन मोड प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि तपाइँ विन्डो मोडमा स्क्रिनमा के भइरहेको छ भनेर हेर्न संघर्ष गर्नुपर्दैन। यो कुनै पनि हालतमा प्रयोग गर्न गाह्रो छैन, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको लोडर प्रयोग गरेर रेजिष्टर गर्नुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
किन अन्य प्रदायकहरूमा PUBG WR प्रयोग गर्ने?
के अन्य प्रदायकहरूले ग्राहकलाई पहिले राख्ने छन्, जस्तो कि हामी यहाँ गेमप्रोनमा गर्छौं? यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ हनीपोटमा धेरै "कम्पनीहरू" प्राप्त गर्न को लागी धेरै कम्पनीहरू छन्। धन्यबाद, प्रयोगकर्ताहरूलाई पहिले नै थाहा छ कि त्यहाँ एक ठाउँ छ (र एक ठाउँ मात्र!) जुन तिनीहरू विश्वसनीय PUBG धोखाको लागि बदल्न सक्छन्। उपकरणमा पैसा खर्च गर्न मात्र तपाईंलाई तल झार्न (र केहि अवस्थाहरूमा, तपाईंलाई रिस उठाउने) बचाउन सकिन्छ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको पहिलो ठाउँमा गेमप्रोनमा फेला परेका उपकरणहरूसँग काम गर्नु हो।
यदि तपाईंलाई एक विश्वसनीय PUBG ह्याक आवश्यक छ कि तपाईंलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन, तपाईंको खोजी अन्तमा समाप्त भयो। हाम्रो इन-गेम मेनू प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको ह्याक सेटिंग्स निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिनेछ, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरू कसरी म्याच फेर्न चाहन्छन् भन्नेमा पूर्ण नियन्त्रण दिन्छ। तपाइँ तपाइँका सबै सुविधाहरू सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई अधिकतममा क्र्या ,्क गर्न सक्नुहुन्छ, वा थोरै थप "सूक्ष्मता" को साथ ह्याक गर्नुहोस् र आफ्ना विरोधीहरूलाई सुरक्षाको गलत अर्थमा आकर्षण गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाइँको ह्याकि experience अनुभव निजीकृत र रमाईलो मा शामिल हुनुहोस्! आज गेमप्रोनको सदस्य बन्नुहोस् र तपाईले किन यति धेरै उपयोगकर्ताहरूले हाम्रो PUBG ह्याकहरूको बारेमा बौद्धिक भइरहेको देख्नुहुनेछ।
गेमप्रोन जहिले पनि उच्च-गुणवत्ता PUBG ह्याक्सहरू रिलीज गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, त्यसो भए टोलीमा किन सम्मिलित हुने छैन? आज एउटा उत्पादन कुञ्जी किन्नुहोस् र हेर्नुहोस् किन GamePron प्रयोगकर्ताहरू लगभग अस्पृश्य छन्।
गर्न तयार प्रभुत्व जमाउनु हाम्रो PUBG WR हैक संग?